९० वर्ष पुरानो ब्रान्डको यौ मोटरसाइकल जब नेपाल भित्रियो, मूल्य सुन्दा सबै चकित ! – Nepali in Australia
October 14, 2020 autherLeaveaComment on ९० वर्ष पुरानो ब्रान्डको यौ मोटरसाइकल जब नेपाल भित्रियो, मूल्य सुन्दा सबै चकित !
९० वर्ष पुरानो मोटरसाइकल ब्रान्ड ‘जावा’ मंगलबारबाट नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। जावाका २ वटा मोडलका ४ संस्करणका बाइक नेपाल बजारमा भित्रिएका हुन्। जावालाई नेपालमा अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको अग्नि मोटोइंकले ल्या‌एको हो। कम्पनीले यसअघि नेपालमा महिन्द्राका प्यासेन्जर गाडी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
चेकोस्लोभाकियामा ९० वर्षको इतिहास बोकेको जावाका मोटरसाइकल क्लासिक, राम्रो इन्जिन क्षमता तथा अब्बल डिजाइनका कारण चर्चित छन् । अग्नि मोटोइंकले नेपालमा हाल २९३ सिसि इन्जिन क्षमताका ‘जावा’ र ‘जावा-४२’ मोडल भित्र्याएको हो। जावाको सिंगल च्यानल एबिएसको मूल्य ६ लाख ४८ हजार ५ सय रूपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै डुअल च्यानल एबिएसको ६ लाख ७६ हजार ५ सय रूपैयाँ पर्छ।
जावा-४२ को सिंगल च्यानल एबिएसको मूल्य ६ लाख २० हजार तोकिएको छ भने डुअल च्यानल एबिएसको ६ लाख ४८ हजार रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यी दुई मोडलका चार संस्करणबाहेक कम्पनीले अर्को मोडल ‘पेराक’ को पनि बुकिङ चाँडै खोल्दै छ। कम्पनीका अनुसार जावा बाइक अहिले तीन रङमा उपलब्ध छ- कालो, मरून (कलेजी) र खरानी (ग्रे)।
त्यस्तै जावा-४२ भने ६ रङमा उपलब्ध छः सुगा रङ, आकाशे निलो, गाढा हरियो, गाढा निलो, रातो र चम्किलो निलो। यी रङलाई कम्पनीले विभिन्न नाम दिएको छ। यो ब्रान्डले भारतमा समेत राम्रो ख्याती कमाइरहेको छ। सन् १९६० दशकमा यो बाइक भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको थियो। यसले हालसम्म १ सय २० ओटा देशमा बजार बिस्तार गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ।